आईजीपीका दाबेदारहरुलाई बालुवाटार प्रवेशमा रोक, यस्तो छ कारण !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
काठमाडौं– नेपाल प्रहरीको नयाँ आईजीपीको लागि दौडधुप सुरु भएको छ । यही चैत्र २९ गतेदेखि प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) प्रकाश अर्यालसहित १५ जना एआईजीले ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण अवकास पाउँदैछन् । आईजीपी अर्यालको अवकाशसँगै नयाँ आईजीपीको लागि दौडधुप सुरु भएको छ ।
नेपाल प्रहरीको नेतृत्वको लागि यतिवेला मैदानमा तीन जना डिआईजी छन् । डिआईजीहरु खर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल र पुष्कर कार्की लगायतका डिआईजीहरु नेतृत्वको लागि मैदानमा छन् । आईजीपीका क्यान्डिेटहरु यतिवेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न प्रयासरत छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने उनीहरुलाई बालुवाटार प्रवेशको लागि ढोकामै रोक लगाएका छन ।
विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुमार्फत उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न प्रयास गरेपनि अहिलेसम्म त्यो प्रयास सफल हुन सकेको छैन् । उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले सही, सक्षम र सवल व्यक्तिलाई नै आईजीपी बनाउने भन्दै आफूलाई भेट्न नआउन सन्देश दिएका छन् ।
आईजीपी दौडमा खनाल, खरेल र काकीसँगै डिआईजीहरु क्रमशः पवन प्रसाद खरेल, उत्तम कार्की, मनोज न्यौपाने, छविलाल जोशी नेतृत्व लिने दौडमा छन्।